युवती भन्दै खोज्दै हिड्दा जब प्रहरीले युवक फेला पार्यो ! प्रहरी नै अक्क र बक्क – Naya Kura Daily
August 29, 2020 185
कञ्चनपुर । प्रहरी कार्यालयमा एउटा उजुरी परेको थियो । युवतीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर लाखौं रुपैया ठगी गरेकी छन् । त्यो उजुरीका आधारमा प्रहरीले ठगी गर्ने युवतीको खोजीमा लाग्यो । महानगरीय अपराध महाशाखामा परेको त्यो उजुरी पछि प्रहरी जब अभियुक्तकहाँ पुग्यो देखेर अक्क न बक्क परेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने ति ब्यक्ति युवती नभएर युवक रहेछन् । उनले गुगलवाट राम्रा युवतीको फोटो डाउनलोड गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत युवती बन्दै ठगी गर्ने गरेको खुल्यो ।
गुगलवाट लिएका युवतीका राम्रा तस्बिर राखेर फेसबुक बनाउने र त्यही फेसवुक मार्फत युवकलाई साथी बनाएर ठगी गर्ने गरेको प्रहरीले रहस्य पत्ता लगायो । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि महिलाको तस्बिर राखेर ठगी गर्ने गर्ने कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका –३ का २७ बर्षीय धनबहादुर शाही भएको खुलेको छ ।
उनी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको टिकाथलीमा बस्दै आएका थिए। काठमाडौंको कोटेश्वरबाट उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अहिले प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
‘शाहीले गुगलबाट महिलाको आर्कषक तस्बिर कपि गरेर फेसबुक बनाएको रैछ,’ महाशाखाका एसपी ईश्वर कार्कीले भने, ‘बिभिन्न ब्यक्तिहरुसंग कुराकानी गरी प्रेमको प्रस्ताव समेत राखेर ठगी गर्ने गरेको खुलेको छ ।
शाहीले रकम माग गर्ने र नदिए आफन्तजन, साथीहरुलाई नराम्रा फोटो पठाई बेइज्जत गरी दिन्छु भन्दै पटक पैसा असुल्ने गरेका थिए । शाहीले एकजनाबाट १ लाख ८० हजार र अर्काबाट ३७ हजार रुपैया ठगी गरेको भेटिएको छ। उनलाई ठगी सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक कारवाहीको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइएको छ।
Prev‘ब्ल्याक प्यान्थर’ अभिनेता चाडविक बोसम्यानको निधन
Nextकाठमाडौँ मै जन्म दिईन तिम्ल्याहा सन्तान: पहिला डर, अहिले उत्साह !
सुनकाण्डमा मुछिएका दुई प्रहरीलाई संगठित अपराध मुद्दामा म्याद थप
भारतबाट पहिलोपटक नेपाली विद्यार्थीको उद्धार
दक्षिणकाली मन्दिरमा अप्रत्यासित घटना मन्दिरमा सबै नाग बाहिर निस्के अनिष्टको संकेत (2477)